City of Vantaa - 20211124_maskisuositus_palaa_somali
Talsoojeedintii ku saabsanayd qaadashada afshareerka ayaa mar kale laga bilaabay iskuullada, machadyada iyo xannaanooyinka
Kooxda iskudduwidda arimaha korona ee magaalo madaxda iyo nawaaxigeeda ayaa go’aan ku gaaray taariikhdu markii ay ahayd 23.11.2021, in laga dhaqangeliyo magaalo madaxda iyo nawaaxigeeda talosoojeedintii ku saabsanayd qaadashada afshareerka, islamarkaana dib loogu noqdo shaqada dhanka internetka ee guriga ama bannaanka goobta shaqada lagu qabanaayay. Arrinkaan waxaa loola jeedaa in laga bilaabo 24.11.2021 magaalo madaxda iyo nawaaxigeeda si ballaaran dib loogu laaban doono qaadashada afshareerka, si kasta oo uu qofku u tallaalan yahay, iyadoo talosoojeedintaas qaadashada afshareerka ay khusayso dhammaan wixii buuxiyay da’da 12-ka sano iyo dadka ka sii waawayn.
Talosoojeedinta qaadashada afshareerka iyo shaqada dhanka internetka lagu qabanaayo, waxaa ay socon doontaa illaa iyo 16.1.2022. Talosoojeedinta qaadashada afshareerka waxaa ay dhaqangalaysaa islamarkii uu go’aankan soo baxay.
Kooxda iskudduwidda arrimaha korona waxaa ay talo ahaan u soo jeedinayaan qaadashada afshareerka ee iskuulka iyo machadyada, laga soo bilaabo ardayda fasalka Lixaad. Sidoo kale talosoojeedinta qaadashada afshareerka waxaa ay khusaysaa shaqaalaha xannaanada. Waxaa kaloo la soo jeedinayaa in dhammaan goobaha shaqada la qaato afshareerka, xittaa haddii ay suuraggal u tahay in la kala fogaado.
Waxbarashada aasaasiga ah ee dugsiga hoose dhexe iyo waxbarashada heerka labaad ee dugsiyada sare iyo machadyada, sidoodii caadiga ahayd ayay uga sii soconaysaa iskuullada dhexdooda.
Dugsiyada hoose- dhexe iyaga ayaa ardayda siinaaya afshareerka. Afshareerka waxaa ardayda fasallada 6.- 9-aad loo qaybinayaa laga bilaabo 24.11.2021. Machadyada waxaa ay afshareerka siinayaan ardayda ka tirsan kooxda waajibaadka waxbarashada ee la ballaariyay (ardayda sannadka koowaad). Ardayda kale iyaga ayaa soo iibsanaaya afshareerka. Haddii aad guriga ku soo illowday afshareerkaaga, waxaad ka heleysaa oo ku siinaaya machadka aad dhigato. Goobta shaqada ee waxbarasho ahaanta loo joogo, waxaa loo hoggaansamayaa tilmaanbixinnada arrimaha korona ee goobta shaqada.
Arrinka laga hadlayaa waa talosoojeedin, ee mahan waajib.
Waxaa wali aad muhiim u ah, in ilmaha iyo ardayduba aanay imaan xannaanada, iskuulka iyo machadka iyagoo xanuunsan, xitaa haddii ay hayaan wax ka mid ah astaamaha feyruska oo fudud, waa in uu ardaygu joogaa guriga. Waxaa kaloo iskuulka dhexdiisa looga dhaqmi doonaa ama loo hoggaansami doonaa talooyinka kale ee ammaanka ah ee la soo jeediyay ee ku saabsan feyruska korona (sida gacmo dhaqista iyo kala fogaanshaha).
Kooxda maamulka xaaladaha dhibaatooyinka jira ee degmada Vantaa ayaa kulan yeelanaya khamiista 25.11.2021. Si firfricooni leh ayaan xaaladda ula soconaynaa, haddii loo bahdana waan idinku soo wargelinaynaa wixii soo kordha ee isbeddel ama caddayn ah ee arrimahaas la xiriira.
Aan ka taxaddarno caafimaadkeenna iyo kan ehelkeennaba!